-Esi mee ka chocolate chocolate achicha na-enweghị àkwá - Ntụziaka | Ntụziaka
Ngela | | Ntụziaka Biscuits, Eggless Ezi ntụziaka
500 gr nke ntụ ọka ntụ ọka
300 gr nke shuga
1 paist nke yist ma ọ bụ, na-emezughị nke ahụ, otu ngwugwu nke 12,5 g nke yist ọhụrụ
2 teaspoons nke mmiri soda
100 gr nke koko ntụ
250 ml nke leche
150 ml mmanụ sunflower
You na-atụ egwu na mgbe ị na-akwadebe achicha na-enweghị àkwá, ọ gaghị adị ire ụtọ? Nke a nwere ọgwụgwọ, n'ihi na taa na Recetin anyị chọrọ ịkọwa otu esi akwadebe achicha ogbo ụtọ chocolate na-enweghị akwa, karịsịa maka allermụ na-arịa àkwá. Ihe omuma bu na udiri achicha chocolate achicha n'enweghi akwa nwere obere soda.
N'ime nnukwu efere ebe akọrọ Efrata, ya bụ, ntụ ọka, yist, shuga na bicarbonate. Etinyela koko, naanị nke a ma jiri mkpirisi ole na ole kpalite.
Na efere ọzọ, gwakọta ihe na-adịghị akọrọ, gụnyere n'ime ya mmiri ara ehi, mmiri na mmanụ sunflower. Gwakọta ihe niile nke ọma ma tinye na-enweghị ịkwụsị iti ihe ndị gara aga gara aga. Tinye koko ntụ ntụ nke nta nke nta, ma nọgide na-akpali.
Ozugbo anyị tinyechara ihe niile n'ime nnukwu efere ahụ, anyị na-akwadebe ebu ihe gbasara 20-25 cm na dayameta, anyị na-ete ya na bọta, ma gbakwunye ngwakọta. Anyị na-etinye oven ka ọ kpoo ọkụ ruo ogo 180, mgbe ọ dị ọkụ, anyị na-etinye ya ghee achicha anyi na ngbanye 180 dika ihe dika nkeji 40.
Lelee na ọ na-esiri ya site na ịpịpịa ihe ntanye n'ime achicha ahụ. Mgbe ọ na-apụta dị ọcha, anyị brownie dị njikere.
Fluffy, dị nnọọ chocolatey na-atọ ụtọ! Ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ ndị ọzọ Ezi ntụziaka nke ogbo achicha na-enweghị akwa, tinye njikọ nke anyị hapụrụ gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Recetin » Ntụziaka » Ntụziaka Biscuits » Otu esi eme ka brownie na enweghị akwa
yist ọhụrụ maka ogbo achicha ??? ma ọ nwere ike ịbụ eze ?? Envelopu ị pụtara yist bụ nke a na-etinyeghị na ya? Asị m ya ihe ị nwere ike dochie x 12'5 nke dị ọhụrụ.
Nwere ike iji ma :)
maka ugboro ole ka obu?
site na 8
Zaghachi Lola Sagazan
Angela n’enweghi ukwu kporo aha mmanu
Nri Isi nri: Nduku zuru oke
Mfukasị ọkụkọ Galik